Johnson &amp; Johnson ဆေးကုမ္ပဏီက လူတယောက်ကို ၈ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ အလျော်ပေးရမယ်
Johnson &amp; Johnson ဆေးကုမ္ပဏီက လူတယောက်ကို ၈ ဘီ...
9 ต.ค. 2562 - 20:12 น.
အမျိုးသားတယောက်က သူသုံးစွဲခဲ့တဲ့ စိတ်ရောဂါဆေးတမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပေးတာတွေမရခဲ့ဘူး၊ အဲဒီဆေးကြောင့် သူရင်သားတွေ ကြီးလာခဲ့တယ် ဆိုကာ ဆေးကုမ္ပဏီကြီး Johnson & Johnson ကိုတရားစွဲခဲ့ပြီး အခုတော့ သူ့ကို ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ ပေးလျော်ဖို့ အမေရိကန်က တရားရုံးတခုက ဆေးကုမ္ပဏီကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် နီကိုလပ်စ် မာရေး ကို လျော်ကြေးငွေပေးဖို့ ဖီလာဒဲဖီးရားက ဂျူရီတရားသူကြီးအဖွဲ့တဖွဲ့ က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
တရားလို မစ္စတာမာရေး ရဲ့ ရှေ့နေက J&J ရဲ့ လက်ခွဲ Janssen ကုမ္ပဏီဟာ Risperdal ဆေးကို စျေးကွက်အတွင်း ထိုးဖောက်ရာမှာ "လူနာတွေထက် အမြတ်ရဖို့ကိုသာကြည့်ခဲ့တယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
J&J ကုမ္ပဏီကတော့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ "သိပ်ကို မညီမျှလွန်းအားကြီးတယ်"လို့ ဆိုကာ အယူခံဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မစ္စတာ မာရေးက သူ့မှာ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ တမျိုးဖြစ်တဲ့ Autistic Spectrum Disorder (ASD) ရှိတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ရောဂါသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၀၃ ကတည်းက အဲဒီဆေးကို စသောက်ခဲ့ရကာ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရင်သားတွေကြီးလာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ Risperdal ဆေးကို စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ (Schizophrenia)၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ(Bipolar) တွေ ကုသရာမှာအသုံးပြုကြပြီး ဆရာဝန်တွေက သင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း ပေးလို့ရတယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
အဲဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို သတိပေးတာ ချွတ်ယွင်းခဲ့တယ်လို့ ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲထားကြတဲ့ အမှုတွေ အမေရိကန်မှာ ဒီတမှုထဲမဟုတ်ဘဲ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လကလည်း ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဘိန်းနဲ့ တူတဲ့ဆေးဝါး (Opioid) ဆေးစွဲမှု အနှံ့အပြား ဖြစ်လာတဲ့ အပေါ် J&J ကုမ္ပဏီကို အိုကလာဟိုးမားပြည်နယ်က တရားသူကြီးတယောက်က ဒေါ်လာ ၅၇၂ သန်း ပေးလျော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
J&J ကုမ္ပဏီဟာ Opioid ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စျေးကွက်အတွင်း ထိုးဖောက်ကြော်ငြာတဲ့ ကမ်ပိန်းလုပ်ရာမှာ "အမှားတွေ အန္တရာယ်များတာတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်"လို့ အဲဒီတုန်းက တရားရုံးကပြောခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ Johnson &amp; Johnson ဆေးကုမ္ပဏီက လူတယောက်ကို ၈ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ အလျော်ပေးရမယ်